Maxamed Cali Kalaay - Wikipedia
Maxamed Cali Kalaay
Maxamed Cali kalaay (Af Ingiriis : Mohamed Ali Clay) (1942-2016) waa feeryahan caan ah oo u dhashay dalka maraykan. Maxamed Cali ayaa taariiikhdu markay aheyd 17.January 1942 ku dhashay magaalada Louisville ee gobolka Kentucky oo ku yaal Koonfurta Mareykanka. Kalaay oo ka dhashay qoys heysta Diinta Masiixiga(Baptism) ayaa waxay waalidkiisu ugu wan qaleen magaca Cassius Marcellus Clay jr. Maxamed Cali waxa uu ku guulaystay Tartanka Feerka Miisaanka Culus tiro ka sadex jeer ah. Sidoo kale waxuu muddada 20-ka sanno ah ee uu ku dhex jiray Cayaaraha Feerka ku guuleystay inuu noqdo Horyaalka Aduunka sanadaha 1964, 1974 iyo 1978. Sanadkii 1999 ayaa Kalaay loo aqoonsaday inuu yahay ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa ee Caalamka soo mara Qarniga 20aad.
1 Qaab Feerka
2 Qaadashada Diinta Islaamka
3 Dagaalkii Vietnam
4 Markii Laga Qaaday Suunka
5 Feerkii Zaire 1974
Maxamed Cali Kalaay waxa uu caan ku ahaa goysmada ama gasta faraha badan taas oo dhib u keeni jirtay feeryahanada isaga la tartama. Waxa kale uu Kalaay ku caan baxay intii uu feerka ku dhex jiray feerka deg-dega ah.
Qaadashada Diinta IslaamkaEdit
1964 ayay ahayd markii ugu horaysay uu Kalaay si la yaab leh uga guulaystay Feeryahanka ahaa Horyaalka Miisaanka Culus ee lagu magacaabi jiray Sonny Liston. Waxuuna Kalaay isla mar ahaantaas la wareegay Suunka cadeynta u ah in uu noqday Horyaalka Aduunka ee Feerka Miisanka Culus. Kalaay oo markaa da'diisu ahayd 22 sanno ayaa noqday Feeryahankii ugu da'da yaraa ee ku guuleysta Suunka Feerka Miisaanka Culus ee taariikhda aduunka soo mara. Muddo yar ka dib markii Kalaay uu noqday Horyaal ayaa waxa uu si lama filaan ah warbaahinta Caalamka uga sheegay in uu qaatay Diinta Islaamka. Sanadkii 1965 markuu Kalaay si rasmi ah ugu biiray Diinta Islaamka ayaa waxuu magaciisa hore ku bedelay magaca islaamka ah ee Maxamed Cali. Kalaay waxa uu qaatay Diinta Islaamka isaga oo aan ka laheyn wax dan qaas ama qarsoon. Waxaana xataa dhici kartay inuu Kalaay talaabadaas ku waayo taageerayaashiisa aad ka u tira badnaa. Laakiin waxa dhacday taasi bedelkeed oo ah in taageerayaasha iyo shacbiyadda uu Kalaay ku lahaa gudaha dalka Mareykanka iyo Caalamka intiisa kaleba ee aad u sii kordheen.
Sanadkii 1966 ayaa Maxamed Cali Kalaay laga qaaday imtixaan ku saabsan cafimaadkiisa, waxaana la sheegay inuu ka qeyb gali karo dagaal ay Dowlada Mareykanka qeyb ka aheyd oo xilligaa ka socday dalka Vietnam. Taasina waxay la macno ahayd in haddii uu Kalaay dagaalka ka qayb qaadanaayo uu guud ahaan ka tago feerka iyo waxbarashaddiisa kaleba. Laakiin Kalaay oo lagu yaqaan dhiiranaan badan ayaa qaadacay arrinkaas oo waa uu diiday inuu dagaal la galo sida uu hadalka u dhigay dad masaakiin ah oo u dhashay dal ka tirsan dunida soo koraysa. Kalaay waxa uu sidoo kale si cad u sheegay in uu gebi ahaan ka soo horjeedo dagaalka Maraykanka ay ku qaadeen Vietnam oo masaafo ahaan aad uga fog dalka Maraykanka, waxuuna sheegay in dagaalkaas uu yahay mid gardaro ku ah shacabka reer Vietnam.
Markii Laga Qaaday SuunkaEdit
Sanadkii 1967 oo ahaa markii Kalaay uu gaaray guulihii ugu badnaa ayeey dawlada Mareykanku ka xayuubisay Suunkii Horyaalka Feerka Miisaanka Culus ee Aduunka. Sababtoo ah waxaa Kalaay lagu soo eedeeyay inuusan wadani aheyn bacdamaa uu diiday ka qayb qaadashada dagaalka ka socda dalka Vietnam. Muddo dhan 3 sanno Kalaay kama uusan qeyb gelin wax tartan-feer ah, laakiin waxa uu feerka mar kale dib ugu soo noqday sanadkii 1970.
Feerkii Zaire 1974Edit
Mid ka mid ah feerarka Aduunka ugu caansan The Rumble in the Jungle oo Maxamed Cali uu qeyb weyn ka ahaa ayaa bishii Oktoobar 1974 lagu qabtay Caasimada dalkii lagu magacaabi jiray Zaïre (Jamhuuriyada Dimuqraadiga Koongo) ee Kinshasa. Kalaay oo ahaa tartame u socday inuu dib u soo ceshto Suunka Horyaalka Feerka Miisaanka Culus ayaa wareeggii 8aad feer la tuuray Feeryahan George Foreman oo markaas ahaa Horyaalka Aduunka. Kalaay waxa uu sidaas darteed mar labaad dib ugu guuleystay Suunka Horyaalka Aduunka ee Miisaanka Culus. Sidoo kale waxaa uu Kalaay mar saddexaad sanadkii 1978 ku guuleystay inuu dib u hanto Suunka Horyaalka Aduunka, ka dib markii uu dhibco tirsi kaga guuleystay Feeryahan Leon Spinks. Maxamed Cali Kalaay ayaa ku dhawaaqay sanadkii 1979 inuu ka fariistay feerka. Si kastaba ha ahaatee waxa uu Kalaay mar kale sanadkii 1980 dib ugu soo laabtay feerka. Waxa uuna tartan feer ah kaga hor yimid Horyaalkii Aduunka Larry Holmes. Kalaay oo markaan rabay inuu markii afaraad ku guuleysto Horyaalka Aduunka ayaa waxaa ciyaarta wareeggii 11aad joojiyey Tababarahiisa Angelo Dundee oo garwaaqsaday in Feeryahankiisa ay soo gaareen dhaawacyo xooggan. Maxamed Cali Kalaay waxa uu gebi ahaan cayaraaha ka fadhiistay horaantii 1980-maadkii isaga oo markaa da'diisu sii caga-cageyneysay 40 sanno. Dhowr sanno ka dibna waxaa Kalaay laga helay cudurka Laleemada Parkinson's Disease.
Maxamed Cali Kalaay waxa uu geeriyoodey 3-da Juun 2016. Allaha u Naxariisto Maxamed Cali Kalaay waxaa maalin jimca ah oo taariikhdu ahayd 10-ka Juun 2016 lagu aasay Qabuuraha Cave Hill Cemetery oo ku yaal magaaladii uu ku dhashay ee Louisville, Kentucky(USA). Kalaay waa Geesi Gardarrada Neceb oo aan la gamban inuu soo bandhigo waxa uu aaminsan yahay. Waa Halyeey ku weyn qalbiyada Shacab Weynaha Aduunka, waxa uuna safka hore kaga jiraa Feeryahanada iyo Shaqsiyaadka kale ee saameyn weyn aduunka ku yeeshay qarnigii tegay ee 20aad. Taariikhda Aduunka ayaa Maxamed Cali Kalaay mar walba xusi doonto.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Maxamed_Cali_Kalaay&oldid=202253"
Last edited on 13 Juun 2020, at 09:29
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 13 Juun 2020, marka ee eheed 09:29.